Ny Kristen Stewart sy Stella Maxwell dia hita miaraka amin'ny tsaho momba ny tantaram-piraisankinan'i Robert Pattinson
Raha tsy misy adihevitra hafa, nolavin'i Kristen Stewart ny vaovao momba ny fihaonany tamin'i Robert Pattinson ary nisaraka tamin'i Stella Maxwell.
Ireo mpankafy ny vampire saga Twilight dia faly naheno fa ireo mpilalao sarimihetsika kristiana Kristen Stewart sy Robert Pattinson, izay efa nilalao an'i Bella Swan sy Edward Cullen, izay tsy nifanerasera tamin'ny raharaham-barotra, dia nanomboka nifampiresaka indray, na dia teo aza ny tsy fifandraisana am-pirahalahiana .
Ny Kristen Stewart sy Robert Pattinson dia hita miaraka
Ireo loharano akaiky an'i Stewart sy Pattinson dia nanamafy fa mbola misy simia eo anelanelan'izy ireo, saingy ny fifandraisana amin'ny mpilalao sarimihetsika miaraka amin'ny sipany dia i Stella Maxwell dia tsy dia malama akory hatramin'izay, ka tsy dia ho gaga loatra izy ireo raha toa ka niombon-tsaka i Kristen ho an'ny zazalahy, manomboka hihaona amin'i Rob indray.
Kristen Stewart sy Robert Pattinson
Ny fanantenana ho amin'ny fihaonana an'i Kristen sy Robert amin'ity indray mitoraka ity dia toa tsy ho tanteraka mihitsy. Ny alahady, naka an'i Stewart 27 taona i Paparazzi, izay hankalaza ny faha-28 taonany, ary Maxwell any amin'ny seranam-piaramanidina any Los Angeles. Nody izy ireo rehefa avy nanao dia lavitra.
Stella Maxwell sy Kristen Stewart any amin'ny seranam-piaramanidina
Ireo zazavavy izay tsy dia faly loatra tamin'ny fifantohan'ireo paparazzi, dia nandeha haingana nanararaotra ny taxi sy hoot.
Tsy fahombiazana izany: ny akanjo 10 mahatsiravina indrindra amin'ny Festival Cannes 2018!
Hetsi-panoherana: mpilalao sarimihetsika manohitra ny fanavakavahana eo amin'ny karipetra mena amin'ny Festival Festival Cannes
Ny fanokafana ny Festival Cannes: Cruz, Blanchett, Stewart, Moore ary Hargeyt dia nanolotra sarivongana sarimihetsika
Farany, ny solontenan'ny Kristen dia nifandray tamin'ny fanolorana ny People, naneho hevitra momba ny fifosana ho azy:
"Aza mino ny gazety. Tsy mifanena amin'ny sekretera i Kristen sy Robert. Tsy mety ho fanontaniana izany, satria ilay mpilalao sarimihetsika amin'ny fifandraisana amin'ny modely Stella Maxwell. "
Bekhati Prinslu no tonga voalohany tao amin'ny lampihazo taorian'ny nahaterahan'ny zaza iray
I Kara Delevin dia naniry ny hamono tena
Scarlett Johansson dia miahiahy momba ny olana momba ny miralenta sy ny zanany vavy amin'ny ho avy
Manoroka ny vehivavy amin'ny vola fotsiny i Ricky Martin
Charlotte Casiraghi dia bevohoka amin'ny vadiny modely rosiana
Hot Ten: Ny Candice Swainpole no anarana modely tena tsara indrindra amin'ny Instagram
Mofomamy avy amin'ny courgettes miaraka amin'ny saosisy
Barberry tsotra - fambolena sy fiahiana
Sakafo sy sotrokely
Ahoana no hanamboarany azy amin'ny trondro?
Boots amin'ny ririnina amin'ny solecteur traktè
Tetezana fanokanana ao amin'ny efitrano
Boots Women's Leather
Akorandriaka ho an'ny ririnina - sakafo mahandro
Inona ny fahasamihafana sy ny fomba hanatanterahana izany?
Ny satroka volom-behivavy ho an'ny dobo
Ahoana ny fomba hananganana lolo?
Akanjo maotina amin'ny fahavitrihana 2015
Ny asa tanana amin'ny ravina amin'ny lohahevitra hoe "Autumn"
Saline manify amin'ny volo
Gastroskopie ny vavony
Famaritana ny vohoka amin'ny soda